အလုပ်အကိုင်အထူးပြုကုသယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / အလုပ်အကိုင်အထူးပြုကုသယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
အလုပ်အကိုင်အထူးပြုကုသယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 480 views
reservation နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ခရီးသွားစာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်နှင့် Duty နမူနာ
ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတည်းခိုခန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသို့မဟုတ်ခရီးသွားလာ, သို့မဟုတ်ထိုင်ခုံခရီးသွားမြှင့်တင်. ပေးထားသောနားနေဆောင်မှချက်ချင်းလူများနှင့်အိတ်ကိုအတည်ပြုရန်စေခြင်းငှါ,, တံတားတိုက်ခံ, သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်း; ထောက်ပံ့ရေး 'passes, ဆော့ဝဲအစုအဝေးခရီးသွားမှတ်တမ်းဤအတူမျှဝေဖို့လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသို့ဆက်သွယ်; သို့မဟုတ်ဧည့်သည်များမှမော်တော်ယာဉ်များသို့မဟုတ်ခရီး data တွေကိုပစ္စုပ္ပန်.
တွက်ချက်မှုကိုပုံမှန်အတိုင်း, ခရီးစဉ်နှင့်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းများနှင့်စွဲချက်, ကွန်ပျူတာများကိုအသုံးချဖို့, ဖတ်စာအုပ်များအားသွင်း, နှင့်ကြိမ်.
မော်တော်ယာဉ်နှင့်နေရာထိုင်ခင်းအဘို့ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ဖန်တီး. အတည်ပြု, ဖက်စ်ဖုန်းများနှင့် PCs ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု..
ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဖြေ, ဟိုတယ်များ, လုပျထုံးလုပျနညျး, နှင့်အစီအစဉ်များကို.
စာရွက်စာတမ်းများဆောက်လုပ်ရန်နှင့်ပြဿနာလိုအပ်သော, 'passes အပါအဝင်, ခရီးစဉ်, နှင့်ခရီးသွား-အာမခံလမ်းညွှန်ချက်များ.
အခန်းထဲမှာစားသုံးသူများကလိုချင်ခရီးသွားရက်မရရှိနိုင်ရှိမရှိတည်ထောင်ရန်, ရရှိနိုင်သည့်အခါ Inquirer အစက်အပြောက် setting.
ထိုကဲ့သို့သောခရီးသွားအခါသမယအဖြစ်ဖောက်သည်အကြောင်းကြားရန်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းအဖွဲ့များ, နှင့်ဗီဇာနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးသွားအချက်အလက်များများ.
ရရှိနိုင်ပါခရီးသည်အိမ်၏အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုရေရှည်တည်တံ့ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ် appropriated အိမ်မှာဓာတ်လှေကားဧရိယာများကို.
ထို့အပြင်ဘော်ဒါ 'passes သတ်မှတ်ပေးရန်အစက်အပြောက်ထွက်ရှာတွေ့မှလေ့လာမှုခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများ.
ကျဆင်းသွားရက်ကျော်နေပြီတှေ့ရရှာမည်, ဝယ်လက်စျေးဝယ်နှင့်စပ်လျဉ်းသို့မဟုတ် misdirected ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ.
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချက်အလက်များ features တွေသိမ်းဆည်းထားပါ.
ဖောက်သည်အကြွေးတွေ Make နှင့်ကြေးကိုလက်မခံ.
လေ့လာရေးခရီး packages များအားပေး, ထူးခြားတဲ့သောနေရာများ, နှင့်အခြားခရီးသွားကုမ္ပဏီများမှ.
ထိုကဲ့သို့သောလမ်းပြအဖြစ်ထောက်ပံ့ရေးစျေးဝယ်, directory များ, လက်ကမ်းစာစောင်များ, နှင့် atlases, အားလပ်ရက်စိတ်ကူးများနှင့်အချက်အလက်များသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူ.
ဆက်သွယ်ရန်မိုတယ်, အိပ်, ခရီးဝန်ထမ်းမကြာသေးမီကြောင်းကြော်ငြာဝတ္ထုရှိသည်, နှင့်အပန်းဖြေ.
အခြားသူများကိုလက်ရှိပြောနေကြသည်အရာကိုတစ်ခုလုံးကိုအသိအမြင် active-နားထောင်ခြင်း-ကမ်းလှမ်း, built ခံရသည့်အမှုအရာနားလည်ရန်အချိန်ကို အသုံးပြု., သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းချက်မေးမြန်းခြင်း, အစားမှားကြောင်းအချိန်များတွင်လမ်းပြနေထက်.
critical အတွေးအခေါ်-အသုံးချပြီးယုတ္တိဗေဒနှင့်နည်းလမ်းများ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဆိုတာတွေ့ရဖို့စဉ်းစား, တွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်အခက်အခဲများမှအခြားရွေးချယ်စရာအဖြေကို.
Active ကိုသင်ယူ-အသိပညာလာမည့်နှင့်တည်ဆဲ problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှစ်ဦးစလုံးနှင့်စပ်လျဉ်းလတ်ဆတ်ကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အရေးပါမှု.
သင်ယူခြင်းသို့ချဉ်း ကပ်. -ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသုံးချဖို့ပြဿနာသင်ကြားရေးတငျပွသင်ကြားမှု / သင်ကြားပို့ချချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကုသမှုသို့မဟုတ်အသစ်အချက်များသင်ယူရသောအခါ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စစ်ဆေးခြင်း-CheckingOREvaluating စွမ်းဆောင်ရည်ကို, သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်မှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအောင်.
လူမှုရေးအမြင်-သိ othersA သဘောထားတွေကိုသူတို့ပြုမူခြင်းနှင့်အသိပညာအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးအဖြစ်.
othersI ခြေလှမ်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Dexter-ပြောင်းခြင်းလုပ်ရပ်များ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-positive တစ်ဦးချင်းစီကိုထောကျပံ့ဖို့နည်းလမ်းများရှာကြံ.
နည်းပညာဒီဇိုင်း-အင်ဂျင်နီယာစားသုံးသူများနှင့်ချမှတ်ခြင်းသို့မဟုတ် align လုပ်ဖို့ပစ္စည်းတွေအစေခံရန်လိုလား.
installation-Installing Device များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုးများ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
အတော်ကြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး-Creating ကွန်ပျူတာ packages များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-မြင်လျှင်အကဲဖြတ်, နာရီမျက်နှာပြင်, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ညွှန်းကိန်းထိရောက်စွာဖျော်ဖြေမယ့်စက်လည်းမရှိသေချာဖြစ်.
စစ်ဆင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲ-မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ devices များသို့မဟုတ် tools များ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
မရှိမဖြစ်တူရိယာကို အသုံးပြု. ပွငျ-ပွငျစနစ်များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ.
ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစာမေးပွဲ-ကွပ်မျက်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အကဲဖြတ်, န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ဖို့.
systems ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လမ်းတိုးတက်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, အခြေအနေများနှင့်အတူအကျိုးကျေးဇူးများကို impact နိုင်ပြီးတဲ့စနစ်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်ဘယ်လို.
systems စွမ်းဆောင်ရည်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များသို့မဟုတ်လက္ခဏာများအားသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လည်းစက်၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ, အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုများတစ်ခိုင်ခံ့စေဖို့လိုအပ်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောစွမ်းဆောင်ရည်ခဲ့.
ဘဏ္ဍာရေး၏စစ်ဆင်ရေးငွေသားခြောအလုပ်ဖျော်ဖြေရရှိရန်မည်သို့အသုံးချမည်ကိုအရင်းအမြစ်များ-ဆုံးဖြတ်, နှင့်စာရင်းအင်းသည်ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်..
အရင်းအမြစ်များ၏သင့်လျော်ပါသည်ဆီသို့ဦးတည်ပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-receiver နဲ့ကြည့်ရှု၏စစ်ဆင်ရေး, န်ဆောင်မှုများ, နှင့်ဂီယာအထူးသဖြင့် function ကိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျ.
အလုပ်သမားအရင်းအမြစ်ဖှယျ၏ကြီးကြပ်မှု, ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, သူတို့လုပ်ကိုင်သောကွောငျ့ပုဂ္ဂိုလ်များ directing, အဆိုပါကျူးကျော်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်.
high-ကျောင်းအဆင့် (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်း High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
အောင်မြင်မှု / လုပ်ငန်း – 83.49%
ဇွဲ – 87.61%
Initiative – 87.19%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 84.93%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 96.51%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 90.99%
ယဉ်ကျေးမှု Direction အဖွဲ့ – 92.87%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 96.80%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 92.11%
AdaptabilityANDMobility – 88.22%
ပါဝင် – 94.80%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 94.40%
ကျင့်ဝတ် – 94.64%
လွတ်လပ်ရေး – 83.33%
တိုးတက်ရေး – 80.36%
analytical အတွေးအခေါ် – 87.88%